Muxuu ka yiri Matthijs de Ligt wararka lala xiriirinayo kooxda Barcelona? – Gool FM
Muxuu ka yiri Matthijs de Ligt wararka lala xiriirinayo kooxda Barcelona?
(Ajax) 18 Nof 2018. Daafaca kooxda Ajax Amsterdam iyo xulka qaranka Holand Matthijs de Ligt ayaa ka jawaab celiyay wararka lala xiriirinayo isaga iyo saaxiibkiis Frenkie de Jong inay u dhaqaaqi doonaan kooxda Barcelona xiliyada soo aadan.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay difaaca birta ah ee kooxda Ajax Matthijs de Ligt, kadib markii wax laga weydiiyay xiisaha uu ka helayo kooxo fara badan ay ugu horeyso Barcelona.
“Waa arin ay saxaafada ka hadlayso, laakiin malahan wax saameyn ah”.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Matthijs de Ligt uu ka war qabo in uu sii joogi doono kooxda Ajax mudo fog, iyadoo ay jiraan warar xan h ee ku aadan inuu bixi doono xili ciyaareedka soo aadan.
Matthijs de Ligt ayaa hadalkiisa intaas kusii daray in haatan uu doonayo in uu diirada saaro inuu horumariyo awoodiisa ciyaareed ka hor inta uusan qaadin talaabada xigta.
Si kastaba Matthijs de Ligt ayaa ka mid ah xidigaha ay kooxda Barcelona bar-tilmaameedka buuxa ka dhiganeyso, si ay ugu buuxisato qeybta dambe ee difaaca, waxayna dooneysaa in saxiixiisa ay u dhaqaaqdo suuqyada soo aadan.